NINKA YIDHI SOMALILAND UMA LAHA GO’ITAAN WAR MOOGEH DHEH-II | Berberanews.com
Home QORMOOYIN NINKA YIDHI SOMALILAND UMA LAHA GO’ITAAN WAR MOOGEH DHEH-II
NINKA YIDHI SOMALILAND UMA LAHA GO’ITAAN WAR MOOGEH DHEH-II
Duur xul iyo dardaarwerin sheekadu way ka soo gudubtay. Ilduuf iyo hilmaan Iyana hadalkoodba daa. Qormadii hore waxan ku iftiimiyay in ereyga “go’itaan” sidiisaba u yahay qadaf sharciyadeed ka dib markii loo kitaab deyay xaga xeerarka caalamiga ah. Wax GO’ITAAN la yidha ma jiroe’ waa dibula soo-noqosho qarannimo iyo burin MIDOW mala awaal ahaa. Sidaas ayaanay u jirin xadhig la dal isu hayay.
Halkan waxan Xuseen Axmed Warsame ugu soo bandhigayaa ja hawereerkii la kowsada maalinta 1st Juulay, 1960 iyo sida wixii la isk dhex booshaaqay uu dhaliwaayay qaran. Waa nasiib darro meesha ka dhacday waxan masuuliyaddeeda iska leh labadan kooxood ee ilaa manta ku hirdamaya hogaanka dal haligmay. Haadda ummaadii Somaliland 1960 meesha tegin, taa manta aynu arkaynu tu ka daran ayaa ka dhici lahayd oo labadan kooxood warmaha ayay isu soofaysanayeen. Waa xaqiiqo aan la dafiri Karin. Soomaali qowmiyad la’aan keli ihi qeyrkeed kama reebin, wax kale ayaa u weheliya.
Qormadan oo ah tii labaad oo jawaab u ah hadal uu jeediyey nin la yidhaa Xuseen Axmed Warsame oo sheegay in aanay Somaliland xaq u lahayn go’itaan ilaa ogolaansho laga helo Soomaliyada konfureed. Anna halkan waxaan idiinku caddayn in kan la yidhi xaqaaga marti uga noqo isna in aanu jiritan iyo qarannimo midna xaq u lahayn!
Akhristoow u fiirso heshiisku wuxu ahaa in marka hore HESHIISKA LABADA QARAN KU MIDOOBAYAAN la meel mariyo. Taasina ma dhicin. Arrornimada 1da Juulay, lagu dhawaaqo dhalashada Jamhuuriyad Soomaaliyeed oo wareegto Madaxweyne lagu meel mariyey iyo tu kaloo iyan ka daran oo la yidhaa “Atto di Unione” ama axdigii Midowga labada dal.
An mar labaad is dul taago ereyga GO’ITAAN. Ugu horeyn Somaliland dal ay ka go’ayso oo shakhsiyad qaanuuni lihi (Legal Personality) oo Jamhuuriyad Soomaaliyeed la yidhaa oo 1960 la kowsatay oo midnimo ka dhaxaysaa haba yaraatee majirto. Hal dal ayaa madaxbannani dhammeystirin helay 1960- dalkaasina waa Somaliland oo buuxisay gebi ahaanbay xxerarka caalamka lagaga dhaqmo.; ammaanadii Qaramada Midoobay dowladda Talyaanigu u maamulaysay mudada tobanka sannadood ah ee la odhanjiray Somalia may buuxin shuruudihii qarannimada (Sida Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, signed December 26, 1933).
Ilaa maanta qarannimada ay sheegato magac-u-yaalka ‘Federaalka Soomaaliya’ waa tii Somaliland ee 26 jUUN, 1960. Sheegashaada wakhtigeedii wuu dhammaaday oo mid shariciyad ku salaysan ma ah; daahana weynu ka feydi dabadeedna iskuud ayey isaga huleeli iyaga oo qaawan oo mudh iyo gacan ah.
Ninkay seegtayoow maqal sir la qarinayo ma aha. Xaqa lahaanshaa dowlad la yidhaa Jamhuuriyad Soomaliyeed oo lagu wareejiyay ma jirto, sida aanay u jirin tu la yidhaa Jamhuurada Dimuqraadiga Soomaaliyeed oo kasoo farcantay Jam. Soomaaliyeed ee 1960. Kuwa ay ka mid yihiin “Transitional National Government”, “Transitional Federal Government of Somalia” iyo tan hadda heehaabaysa ee la maac baxday “Federal Government of Somalia” wuxuba waa nirgo ka tafiirmay hal asalkeedu xaaraan ahaa. Sidaa darted la ogyahay in aanay layn Waxa loo yaqaan “Shakhsiyad Qaanuni ah” ama “Legal Personality.” Iyo kuwo la yidha “Succession of States.” Sharci iyo marci kii la doonaba ha loo kitaab furo.” Waa maangade abaar ah iyo nin dirri maax ka deyay!
Ta koowaad Bishii Juun 21, 1960 sagaanshankii (90 xubnood e Glaha Wakiilada Somalia iyo labatan Soomaali ah oo lagu kordhiyey ayaa anxiyay wax lagu magacaabo “Distoorka Jamhuuriyadda Soomaaliya!”The Constitution of the Somali Republic.”
Ta labaad Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee Dowladda Talyaanigu taajka beenta u xidhay heshiisyada caalamiga ah ee ay ku wareejisay waa inta u dhexaysa 2ndDecember 1950 ilaa 30th Juun,1960. Waxay ku koobanyihiin tobankii sannadood eek u meel-gaadhka Talyaani u xukumayay. Wixii heshiiso Dowladda Talyaanigu wakiilka uga iyaga qoran oo tiradoodu dhantahay 19 heshiis lab-geesood ayuu Talyaanigu doona in uu ku wareejiyo; hase ahata waxa loogu jawaabay in heshiisyadaa loola dhaqmi doono sida qodobka 67 ee distoorka Jamhuuriyadda Soomaaliya qeexyo.
Ta seddexaad dunidu way ka warqabtaa in aanay sugnayn soohdinta Somalia iyo Ethiopa si waafaaqsan xeearka caalamiga ah ee sohdimaha; sidoo kale Iyana soohdinta dhinac badda ee Somalia iyo Kenya iaya ma sugna oo waa taa ilaa manta laga warsugayo Maxkamadda Addunka.
Fiiro gaar ah: Heshiiska Midowga Somaliland iyo Somalia ee Golihii wakiilada Somaliland anxiyay Bishii Juun 27th 1960 waxa ku jira qodob sheegaya in lala Midoobayo dal midaysan oo la magic bixidoona “Jamhuuriyadda Soomaaliya. Akhristoow bal iswedii in aynu qeyb ka nahay distoorka la ansixiyay Juun 21st Juun, 1960 iyo kii loo ballansana in Juulay 1st 1960 lagu midoobo; iyama ayaynu ka mid noqonay? Labada midna kamaynaan midnoqon. Ciddii dacwad ka qabtaa dayax guudkiisa gantaalo ha ka soo afuufaan.
La soco kuwa dambe waxaynu ku eegi is dhexyaacii asqadii 30th June, 1960 iyo 1stJuly, 1960
Previous articleDanaha Shacbiga ayaan ka Door-biday
Next articleto lead NBC’s Olympic marketing